China ZSG Linear mihetsiketsika efijery fanamboarana sy orinasa | Fitaovana fanamaivanana Chengxin
ZSG andian-tsarimihetsika mihetsiketsika mivantana dia fitaovana vaovao sy mahomby, izay manana ny toetran'ny fahombiazana avo, akanjo ambany, tabataba ambany, androm-piainana lava, fisorohana ny fandotoana, fanamorana ara-toekarena, fitsitsiana angovo ary fisehoana tsara tarehy. Izy io dia be mpampiasa amin'ny fizahana fizahana poti lehibe, salantsalany ary kely amin'ny fitrandrahana, metallurgy, arina, indostria simika, herinaratra, fitaovana fananganana ary indostria hafa. Indrindra amin'ny indostrian'ny metalurgique, izy io no fitaovana fitiliana be mpampiasa indrindra eto ambanin'ny fatana fandoroana, ny zavamaniry bitika ary ny concentrator. Mampiasa môtô vibration vaovao na hetsi-panoherana vaovao ilay motera ho toy ny loharano hovitrovitra, fanohanana lohataona fingotra ary fanokanan-kovitra. Izy io dia manana tombony amin'ny fahaiza-manao fanodinana lehibe, fahombiazan'ny fitiliana avo, fanoloana efijery mety, fametrahana tsotra sy fikojakojana.
Ny efijery ZSG dia mitanjozotra mandeha môtô na motera tsotra mba handroahana ny excite vibration mba hampihozongozona fotoana fohy ny vatan'ny efijery manaraka ny torolàlana momba ny hery mahaliana, ary ny fitaovan'ny biby dia mamindra parabola amin'ny tsipika mahitsy eo amin'ny sehatry ny efijery, mba hahatratrarana ny tanjon'ny fisavana.
ZSG andian-dahatsoratra mihetsiketsika mitanjozotra dia misy loharanom-pihoviana, vatan'ny efijery, efijery efijery, fitaovana manalefaka ary bracket ambany. Ny takelaka misy ny masinina fanakonana dia vita amin'ny takelaka vy avo lenta, ary ny takelaka amin'ny lafiny dia mifandray amin'ny andry sy ny fototry ny fihoaram-pefy amin'ny alàlan'ny bolt mahery na rivet. Ny firafitra dia mitombina, mafy orina ary mateza.
Sarin-tsarimihetsika momba ny motera mihetsika ：
Sarina scématique an'ny exciter vibration ：
Masontsivana ara-teknika (miaraka amin'ny motera hovitrovitra)
Sivana haben'ny mm
fahaiza-manao fanodinana t / h
Fitaovana maotera hovitrovitra
Masontsivana teknika (miaraka amin'ny exciter vibration)
Previous: ZK series series get vibrating
Manaraka: ZSL andian-tsarimihetsika goavambe goavambe mangatsiaka mangatsiaka